dhibaatooyin iPhone yihiin madaxooda iyagoo fool xun barbaarinta hadda kasta oo markaas. Iyada oo inta badan oo inaga mid ah u muuqdaan in ay la habituated la badan laakiin ma diidi karaan sida looga xumaado waxa uu helo! Markhaatiyada madal mobile Apple cusub ee taxanaha arrin joogto ah, weli waa Yaabe Illeen la yaab leh sida dukaamada kasta waxay leedahay arrimaha ay sifo. Marka laga soo taggo qaar ka mid ah muuqaalada weerarka, barnaamijyadooda cusub oo uga faaidaysan yar, diidmo ka dhigi ay joogaan sidaas oo kale. Inkasta oo aanu ku talinaynaa in aad sii xariirta barnaamijyadooda ama hubi u dhibaatooyinka yar, xaqiiqadu waxa ay tahay warsiinta siinayaa si ay dhibaatooyinka cusub oo adag. Halkii ay ka shalaayay aad iibsatay ama argagax ku dhufatay u shilalka joogtada ah, waxaa wanaagsan in la ogaado sida aad u qabto karo.
Sida ugu dhaqsaha badan aad u sii akhriska u eegid ku saabsan iPhone, idinka Cafiyi wax ku ayna duleella u yar oo qoraal ah ama xitaa kuwa aan ku sheegay waxay ku siin kartaa waqti adag. Waxaa hoos ku qoran 10 arrimaha software weyn oo caadi ah in dadka isticmaala iPhone, iyadoo aan loo eegin daydo ka.
Haddii jira warar sheegaya in la rumaysto, barnaamijyadooda sii wateen uu xitaa ka sii badan yihiin loo isticmaalaa in lagu horaantii iPhone. Haddii aan ku filan, screen buluug dhimashada (BSOD) ma aha wax aan caadi ahayn marka rebooting waxaa loo sameeyaa. Wax la odhan karaa hubaal ah sida ay u maxaad waxyaalahan u sii noqnoqda ama sida waa in ay la go'an laakiin horumarinta ayaa u socda ayna.
Apps gashid baxay
Xanuun kordhaaya hubaal! Isticmaalayaasha ayaa sii kordheysa ay ogaadeen in barnaamijyadooda u baahan tahay in laguu oggollaan in si joogta ah, waayo, waxay u muuqdaan kuwo aadan si ay u shaqeeyaan. Dhab ahaantii, barnaamijyadooda yar u baahan tahay in la si wadajir saaro sidii horumarinta sidaas oo kale sameeyaan. Weli deminta app asalka u raaxayn kartaa hoos tab goobaha saamayn fiican ku.
Apple ee retina aan shaki ku jirin ugu wanaagsan ee badan, laakiin kuwa leexinaaya sida mar walba ay joogaan. Haddii 5s iPhone waxaa loo arkaa, waa kaliya 4 inches ku qotonta sida shirkadda ayaa dareensan in ka dhigaysa qalabka fudud in ay ku shaqeeyaan. Tani waxay timid kaddib markii khilaaf ah oo af badan oo xan ah in went- bandhigay weyn yahay kaararka.
IPhone tiro yar ayaa u arkay wax cajiib ah sida adiga oo riixaya furaha in kasta oo natiijooyinka keyboard rakibay gujisid ay xayirto. Dabcan, taas oo keenta in xannibaadda aragtida furayaasha kale ama erayo soo jeediyay. Users yar ayaa isku dayay in ay gacanta ee waa uun Inay Dhahaan in deminta 'Zoom' ee 'Settings>' Xidhiidhka 'xalin arrinta yara. Si kastaba ha ahaatee, waa ku meel gaar ah oo kaliya.
Xayiran on Apple Logo
Marka ay ogaadeen in qalab aad waxaa ku xayiran on logo ee Apple, waxaad u baahan tahay in lagu hubiyo arrin kasta oo hab dib u soo kabashada. In kastoo tani ma ahan wax ka mid ah sanduuqa aad mar walba qaban karaa in ay hurdada / button ka dib ka dibna button guriga aan ka yarayn 10 ilbiriqsi ilaa logo baaba'aa. Ugu dambayntii waxa aanu laakiin haddii aan, hab kabashada waa khasab.
Apple dhaxyada ka go'an in ay 'tayo leh masawirkan iyo camera u oolli-iyo video muuqaalada xiddig'. Si kastaba ha ahaatee, dhibaatada ka imanaysaa arrin megapixel hooseeyo, taasoo aan la dabooli qaar ka mid ah lagu daro ugu fiican sida flash midab True, gaabis-dhaqaaq ama hagaajinta kale ee software.
Walac Purple on sawiro
Waxa ay noqon kartaa waayo-aragnimo ah oo niyad-jab haddii aad dhici si aad u ogaato in shot oo qumman waa intruded nuurka cajiib ah guduud, in meel uu ahaa waqti aad toogtay ama ma saamayn gaar ah iyo sidoo kale. Dabcan waxaad gaashaan kartaa gacanta ku ah ama ay isku dayaan xaglo kala duwan, laakiin waxaan shaki.
Dhibaatooyin dhaqmaan shidma
Tani waxay si gaar dareemi waayo, nuqul 5s in ay muujiyaan si qaldan dhexdiisa dareemayaal, gaar ahaan tignoolaji, accelerometer iyo wixii la mid ah. Dhibaatadaan taagan cadda xitaa hadda shirkaddu waxay qaaday mowqifka firfircoon hayno.
Screen xiriiri kaliftay
Waxaa la yaab leh laakiin iPhone yar u muuqdaan in ay hoos u taabashada-screen aan sabab lahayn oo dhan. Waa hagaag waxaa jira waxyeello ma qaadan la xiriiri dukaanka kuugu dhow Apple laakiin waxa aan la hubin haddii wax dib u soo ceshato caadi ah. In kastoo sacab muggiis ayaa ay saameeyeen dhibaatadan, weli sababta in ay qaataan fursado?
Hakinta intii lagu update
La mid ah dhibaatada keyboard ah, warsiinta noqon kartaa caqabad dhab ah ku iPhone. Waxaad kartaa isku day sidii hore haysta on inay button hurdada / dib ilaa rebooting la sameeyo logo baaba'aa gebi ahaanba. Xaaladdan oo kale, waxa aan la xalin, warsiinta ayaa lagu tijaabin karaa jeer ka yar.
Waxaa jira ogaaaday ee arrimaha saameeya user guud ee iPhone. Liiska yar oo iyaga lagu xaliyo ma aha dhamaadka sheekada, sidaas sii raadinta on.
> Resource > iPhone > 10 Common iPhone Software Dhibaatooyinka